Iphrojekthi yedolobha iLong You eZhejiang, eChina izophothulwa ngoSepthemba 28, 2020
NgoSepthemba 2020, amathangi amabili okulwa nomlilo esifundazweni saseZhejiang, eChina aqedwa ngokuyisisekelo, futhi alandela ukushisa ukulondolozwa imishini isaqhubeka.
La mathangi amabili amanzi aphakeme ngamamitha ayi-11.5 namamitha ayi-8.4 ububanzi. Banophahla lwethangi nelihedi eseceleni. Uma kunesidingo, singashintsha futhi esitebhisini esiqondile.
Lesi isithombe sethangi eliphelile.
Isikhathi sokwakha siyizinsuku zokusebenza eziyi-18 sezizonke, zingu-12 sezizonke izisebenzi zokufaka, kufaka phakathi nabafundisi ababili bokufakwa.
Uma ufuna ukwazi kabanzi, kunemininingwane yokuxhumana phezulu kuwebhusayithi, ungangithinta,
ngiyabonga ngokuphequlula, ngiyabonga, ngifisa ukuthi ube nosuku oluhle!
Isikhathi Iposi: Dis-24-2020